Malignant (2021) – Gold Channel Movies
Horror movieကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် အသစ်စက်စက်ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Malignant(2021)ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် Sep 10/2021မှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ IMDb 6.4/10ရရှိထားပါတယ်။ Horror movieဆိုပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဒီဆင်ဟာ နှစ်နှစ်အတွင်း ဒဲရစ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကို သုံးကြိမ်တိတိဆောင်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ကြိမ်မှ အဖက်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ည လင်မယားနှစ်ယောက် စကားများကြရင်း ဒဲရစ်စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ မက်ဒီရဲ့ခေါင်းနဲ့နံရံကို စောင့်တွန်းလိုက်မိသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီညမှာပဲ သူ့အိမ်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်သတ်တာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ မက်ဒီလည်း ယောက်ျားဖြစ်သူ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေဆုံးနေတာကို မြင်ပြီး သတိလစ်မေ့မြောသွားခဲ့ပါတယ်။ လူသတ်သမားရဲ့ သဲလွန်စတစ်ခုမှမကျန်ခဲ့တာကြောင့် စုံထောက်တွေလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ဒေါက်တာဝီဘာ ဒေါက်တာဖီးလ်နဲ့ ဒေါက်တာပရွန်းတို့ မတူညီတဲ့နေရာတစ်ခုစီမှာ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက ဒီလူသတ်မြင်ကွင်းအားလုံးကို ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို မျက်မြင်မြင်တွေ့လိုက်ရတာက မက်ဒီဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို စုံထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပေမယ့် စုံထောက်တွေက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ မက်ဒီနဲ့သူ့ညီမ ဆစ်ဒနီဟာ စုံထောက်တွေကို သက်သေပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
လူသတ်သမားရဲ့နောက်ကို လိုက်ရင်း မက်ဒီရဲ့ ကလေးဘဝကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အတိတ်အကြောင်းအရာကို သူတို့သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လူသတ်သမားဟာ မက်ဒီရဲ့ကပ်ပါးအမွှာဖြစ်နေပါတယ်။ မက်ဒီလုံးဝမေ့နေခဲ့တဲ့ အတိတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ?လူသတ်သမားက ဘယ်လိုရန်ညှိုးတွေကြောင့် ဆရာဝန်တွေကို လိုက်သတ်ခဲ့တာလဲ? ဒီအမှုတွေရဲ့နောက်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှူပေးပါဦးပရိသတ်ကြီးရေ….
Phyan KalaySeptember 15, 2021Reply